बन्दा बन्दिमा अनिन्द्राको समस्या ! कसरी मुक्ति पाउने ? - khabarchakra.com ~ News from nepal
७ भाद्र २०७७, आईतवार १८:०९ 23/08/2020 Khabar Chakra
निन्द्रा पनि मानिसलाई नभई नहुने अति आवश्यकता मध्येको एक हो । शारिरिक तथा मानसिक रुपमा स्बास्थ्य रहन प्रयाप्त निन्दाको जरुरत पर्दछ। निदाएको अवस्थामा मानव शरीरका सबै प्रणालीहरूको नवीकरण हुन्छ। यसले हाम्रो शरीर र मस्तिष्कलाई विश्राम मिल्छ। जब हामी निदाउँछौ शरीरले विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्छ। त्यसैले बिहान उठेपछि हल्का र फुर्तिलो अनुभव हुन्छ ।
प्राकृतिक बिपति , रोगको संक्रमिण जस्ता कुरा मान्छेको बहसमा हुदैनन। कहिले देखापर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुदैन । त्यसको सामना गर्न मानसिक रुपमा ब्यक्ति तयार भएको पनि हुदैन । कोरोनाको संकट पनि एक्कासी देखापर्यो । नयाँ रोगले बिश्व भरि नै महामारीको रुप लिदा मानिसमा तनाब, डर, चिन्ता, उत्तेजना, आवेग बढेर जानु स्बभाविकै हो । जसले छोटो समयको लागि अनिन्द्राको समस्या ल्याउन सक्छ । प्रकोप कम हुँदै जादा अनिन्द्राको समस्या पनि कम हुँदै जान्छ। तर आफ्नो स्व हेरचाहमा भने ध्यान पुर्याउनु आबस्यक हुन्छ।
बिपत्तिको बेला खानपानमा पनि समस्या आउन सक्छ। खानेकुराको अभाब हुन सक्छ । स्बस्थ र पोषिलो खानेकुरा जुटाउन गार्‍हो पर्न सक्छ । तर पनि सकेसम्म खानपानलाई संतुलित बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। खानामा पौष्टिक तत्वको कमि तथा अत्याधिक मात्रामा जंक फुडहरु खानाले अनिन्द्राको समस्या देखिन्छ ।
कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना बढी खानाले, चीनी, मैदा, सोडा, कुकिज, सेतो चामल र रोटी जस्ता खानाले अनिन्द्राको समस्यालाई बढाउछ। धेरै चिया, कफी, सफ्ट ड्रिंक , अत्याधिक अमिलो , पिरो, मसलायुक्त खाना, धेरै चिल्लो खानेकुरा, चुरोट, रक्सी तथा लागु अौषधिको सेवनले अनिन्द्राको समस्या बढाउछ । त्यसैले बन्दाबन्दीको समयमा अनिन्द्राको समस्याबाट मुक्ति पाउन खानेकुरामा बिशेष ख्याल गर्नु पर्छ। प्याकेटमा उपलब्ध हुने चाउचाउ, दालमोठ जस्ता खानेकुरा सकेसम्म खानु हुदैन । फास्टफुडलाई त निन्द्राको शत्रु नै मानिन्छ ।
धेरैजसो अबस्थामा मानसिक कारणले निन्द्रा विथोलिने गर्छ । मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगमा अनिन्द्राको समस्या एउटा लक्षणको रुपमा देखिन सक्छ। पछिल्लो समय कोरोनाको संकटले गर्दा मानिसमा मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या बढेर गएको पाईन्छ । बिशेष गरि मानसिक आघात, डर- चिन्ता जन्य समस्याहरु तथा डिप्रेसन जस्ता मानसिक समस्या बढिमा देखिएकोछ ।
← पछिल्लो २४ घण्टामा ३ जनाको मृत्यु, मृतक संख्या १४९
समुदायमा कोरोाना फैलिएको आशंकाले पुनः एक साताका लागि थपियो निषेधाज्ञा →
कोरोना जाँच्ने RDT र PCR परीक्षण : मेरो एक अनुभव
१० जेष्ठ २०७७, शनिबार ०९:३१ Khabar Chakra 0
२९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार २१:५० Khabar Chakra 0
उस्तै रुपमा देखिएको कोभिद् १९ र विस्तारवाद
११ जेष्ठ २०७७, आईतवार १४:३३ Khabar Chakra 0